Gaming Guqula Abantu Futhi Booth Cashier Job Description / Imisebenzi Futhi Umthwalo Isifanekiso – JobDescriptionSample.org
Ikhaya / Ukukhangisa / Gaming Guqula Abantu Futhi Booth Cashier Job Description / Imisebenzi Futhi Umthwalo Isifanekiso
superadmin Juni 28, 2016 Ukukhangisa 7 Amazwana 1,658 Ukubukwa
Exchange ukheshe, amathokheni, futhi ama-chips customersA zamadola. Kungenzeka ukukhipha uthole isiginesha umthengi ku umthethosivivinywa bese ukufunjathiswa. Kungenzeka ukubala kanye intela imali zangaphansi, noma ukuqhuba ezihlukanisa amahhovisi endaweni slot machine futhi unikeze ebhange imali ukushintsha abantu kusukela ekuqaleni hambisa.
Umsebenzi Amakhono Udinga
Ixhomeke zamadola intela izimali zangaphansi.
Sigcine imibhalo ezifanele sokuthenga reconciliations, ukugunyazwa izinhlobo, kanye Ukuhwebelana kwezimali.
Shintshanisa credit, futhi yekhasino chips, futhi ukudala ulungise kubathengi.
Lalela abawinile for jackpot isexwayiso izinsimbi kanye inkinga ukufunjathiswa.
Gcina Ukuvikelwa isithumbanja ngokuhambisana nezimiso.
Luhlanganise izifingqo zama yansuku zonke amadili izincwadi ukuzinza.
Workin lapho slot-imishini zingatholakala futhi uhlole indawo inikezwa phansi yekhasino.
Zuza clientsA abasayina namarisidi lapho wenkokhelo lidlule inani endaweni slot-umshini.
Ukunikeza amageyimu chips, amathikithi eliphezulu kwabanye abasebenzi ngoba Resell, noma abashisekeli, noma amathokheni.
Nquma ababekhona okuzuzile noma ilahlekile by by ukufaneleka chips.
Zihlobise imali-yasebhange kusukela ekuqaleni ukudluliswa ngamunye abantu bashintshe.
Thatha izicelo zamakhadi esikweletu ngaphambi futhi uqinisekise credit izinkomba ukuphakela uhlole-cashing ukwamukelwa noma ukusungula endlini credit akhawunti.
Yenza ezifana isibonelo ukusula imali sezimoto, ukulungiswa ezincane ku slotmachines.
Umsebenzi Izinto Kuyadingeka
Ukufunda Isifundo sokuqondisisa-Ekwazini okulungiselelwe imisho kanye imigqa kumadokhumenti ezihlobene nomsebenzi.
Active Ukulalela-Ukunika ukuqaphela ephelele ukuthi abanye abantu bathi, ekuzuzeni isikhathi ukuqonda izici enziwa, nezindaba lucela njengoba elungile, futhi ungalokothi mesmerizing ngezikhathi ukuthi abantwana azamukeleki.
Publishing-Ephepheni ezifanele ngokuhambisana nezidingo isixuku ukukhuluma ngokuphumelelayo.
Ukukhuluma-Ukuxoxa nabanye ukuba idlulisele ukwaziswa kahle.
Mathematics, i-maths ukulungisa izinkinga.
Isayensi-Ukusebenzisa izixazululo kanye nemithetho elawulwa ukuxazulula izinkinga.
Ukucabanga ukuthi isizathu ezibucayi-Ukusebenzisa nezizathu ukuqaphela izinzuzo nemibi Imiphumela, izindlela enye noma tindlelanchubo izinkinga.
ukubaluleka Active Imininingwane Learning-ukusiqonda fresh ngokuphathelene nokuxazulula izinkinga kanye izinqumo ngasinye zamanje nezesikhathi esizayo.
Ukufunda Izindlela-Ukukhetha nokusebenzisa izindlela trainingORinstructional futhi icubungula afanele isimo lapho ufunda noma imfundiso amaphuzu amasha.
Ihlola-Monitoring / Ukuthola ukusebenza ngawe siqu, abantu ukuthi kukhona ezengeziwe, noma izinkampani ukwenza izithuthukisi noma cabanga izinyathelo zokulungisa.
Komphakathi Perceptiveness-Ukuqaphela abanye’ ukusabela kungani zisabela ngoba benza futhi ukuqonda.
Control-Ukulungisa netento ngekwemagugu izinyathelo othersI.
Ukuthonya-Obukholisayo abanye ukuba bathuthukise ukuziphatha noma nongqondongqondo zabo.
Settlement-Ukuthatha abanye ndawonye ngifuna ukuvumelanisa ukuhlukahluka.
Sibayala-Ngokufundisa abanye howto sithuthe.
Izikhungo Orientation-Kahle efuna amasu ukuze asize abantu.
Advanced Inkinga-Ukuxazulula-Inquma izinkinga eziphambili nokubuyekeza ulwazi ukuthi ahlobene ukuhlola nokwakha izindlela futhi zisebenza izixazululo.
Operations kulinganisa-eliHlolako idinga futhi isixazululo izimfanelo ukudala isitayela.
Ubuchwepheshe Design-Technology ukusebenza ngabanye nokumisa amathuluzi noma odala izifiso.
Amathuluzi amathuluzi Ukukhethwa-Inquma futhi uhlobo imishini kwakudingeka ukwenza umsebenzi.
Isitolimende-Ukufaka imishini, imishini, Izintambo zikagesi ezisobala, noma izinhlelo ukuba ngokuvamile ukuhlangabezana izici.
UHlelo-Ukubhala ikhompyutha amaphakheji ngekwetinhloso letehlukene.
Ukusebenza namasumpa Monitoring-Ukubheka, ukuhlolwa, noma izimpawu ezahlukene ukuqinisekisa i okokusebenza ukusebenza kahle.
Ukusebenza nokwengamela Phatha-Ukuvimbela imisebenzi yemikhiqizo noma izinhlelo.
Isondlo-Buciko yokondla okungukuthi ojwayelekile imikhiqizo futhi ekunqumeni lapho futhi hlobo luni yokondla kuba nesidingo.
Ukuxazulula-Ukunquma izizathu yokusebenza amaphutha bese ukhetha indlela ukuqhubeka nanoma-ke.
Ukubuyisela-Ukubeka amadivayisi noma izindlela sisebenzisa imishini ukuthi ziyadingeka.
Quality Control Examination-Buciko ukuhlolwa kanye ukuhlolwa izinto, amasevisi, noma izinqubo ukuhlola izinga noma ukusebenza kahle.
Buka futhi Decisionmaking-ucabangela amanani ukuqhathanisa kanye nezinzuzo izenzo kungenzeka ukukhetha omunye ofanele kakhulu.
Ukuhlaziywa Ukuthola nje indlela nokuthuthukiswa kulungiselelwa, imisebenzi, nemibandela kuzothinta imiphumela futhi hlobo luni amasu kufanele enze.
Izindlela Ukuhlaziywa Ukuthola izindlela noma amasignali ukusebenza kanye efanele noma imisebenzi kwakudingeka aqinise ukusebenza, ngokuhlobene imigomo kohlelo.
Timemanagement-Ukuphatha komuntu isikhathi siqu futhi abanye’ inkathi.
Ukusebenza kwezinhlaka Imali-Ukunquma indlela zamadola iyitshalwa sokuthola umsebenzi igcwaliswe, kanye ne-accounting for lezi zindleko.
Ukusebenza kwezinhlaka Into Resources-Ukuthola futhi ukuthola maqondana nokusetshenziswa ekahle amasevisi imishini, futhi izingxenye ezidingwa ukwenza umsebenzi othile.
Ukusebenza kwezinhlaka Abasebenzi Resources-Ugqozi, ekuthuthukiseni, futhi kuhloswe abantu njengoba ukusebenza, ukukhomba abantu phezulu ngoba umsebenzi wakho.
Imfuneko Ezemfundo Experience Imfuneko
Senior High School Degree (noma kukaGedaliya noma Senior School kwefrakshini Certificate)
Ngaphansi-ngaphandle High School Diploma
Izinhlelo eziningi School
Ukulawulwa komsebenzi Amakhono Imfuneko
ukuzimisela – 87.05%
umzamo – 87.08%
Usizo – 89.96%
Worry Abanye – 88.32%
Ukuhambisana Komphakathi – 86.73%
Ukuzithiba – 92.31%
ingcindezi IThreshold ungayifaka – 89.33%
ukwethembeka – 93.58%
Ukuqaphela Yokuxhumana – 91.95%
Ukuthembeka – 88.67%
Thuthuka – 86.97%
Analytical Ukucabanga – 87.80%